WhatsApp တွင်ဖုန်းနံပါတ်ကိုဘယ်လိုပြောင်းရမလဲ Androidsis
အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုတွင်ဖြစ်နိုင်သည် သွားသင့်ဖုန်းနံပါတ်ပြောင်းပါ, ဒါပေမယ့်သင်ကတူညီတဲ့ကိရိယာကိုသိမ်းထားမယ်။ ဤသည်သည် WhatsApp ကဲ့သို့သောအပလီကေးရှင်းအချို့ကိုအသုံးပြုခြင်း၏အကျိုးဆက်များစွာရှိနိုင်သည့်အရာဖြစ်သည်။ ဤဖုန်းနံပါတ်အပြောင်းအလဲရှိစာတိုပေးပို့ခြင်းလုပ်ငန်းသုံးပရိုဂရမ်တွင်သင်၏ချက်တင်ကိုမပျောက်လို။ ဖြစ်သည်။
ကံကောင်းတာကဒီအခြေအနေမျိုးမှာငါတို့ WhatsApp ကိုယ်တိုင်ကအကူအညီရခဲ့တယ်။ တစ်လမ်းလည်းမရှိကတည်းက app ထဲမှာရှိတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုပြောင်းလို့ရပါတယ်, ငါတို့အချိန်မရွေး၌ရှိသည်သောစကားများဆုံးရှုံးဖို့သွားကြသည်မဟုတ်ဒါကြောင့်။ နောက်တစ်ခုဘာလုပ်ရမလဲ
၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့ဖုန်းနံပါတ်အသစ်ကိုရသောအခါကျွန်ုပ်တို့ဖြတ်သန်းရမည့်လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏ WhatsApp အကောင့်တွင်အသုံးပြုသောဖုန်းနံပါတ်အဟောင်းကိုကျွန်ုပ်တို့မဖျက်နိုင်သေးပါ။ ပထမ ဦး စွာ app တွင်ရှိသောကျွန်ုပ်တို့၏ chats များကိုအရန်ပြုလုပ်ရန်လိုအပ်ပြီး၎င်းကို Google Drive တွင်သိမ်းဆည်းရမည်။
သင်၏ WhatsApp အကောင့်ကို Albert Rivera ကဲ့သို့ခိုးယူခြင်းမှကာကွယ်ရန်
1 သင့်ရဲ့ chats backup လုပ်ထား
2 WhatsApp တွင်ဖုန်းနံပါတ်ကိုပြောင်းပါ
သင့်ရဲ့ chats backup လုပ်ထား
မသန်စွမ်း WhatsApp တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ချက်တင်များကိုအရန်ပြုလုပ်ပါ လျှောက်လွှာတွင်အဆင့်အနည်းငယ်သာကျွန်ုပ်တို့လိုက်နာရမည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့တွင်အက်ပလီကေးရှင်းရှိချိန်ညှိချက်များအတွင်းရှိလုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်၊ ထို့ကြောင့်၎င်းနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ရှုပ်ထွေးမှုများစွာမရှိပါ။ ဤကိစ္စတွင်ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ရမည့်အရာမှာအောက်ပါတို့ဖြစ်သည်။
အရန်ကူးခြင်း option ကိုရိုက်ထည့်ပါ
WiFi ကို အသုံးပြု၍ သင်မိတ္တူကူးယူရန်ဘယ်လောက်လိုချင်သည်ကိုမကြာခဏသတ်မှတ်ပါ
ထိုအခါအစိမ်းရောင် Save ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ
ဂူဂဲလ်ဒရိုက်ထဲ၌စကားဝှက်များကိုအရံသိမ်းဆည်းထားခြင်းဖြင့်တစ်စုံတစ်ခုဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါက၎င်းတို့အားအချိန်မရွေးပြန်ယူနိုင်သည်။ မိတ္တူကို Google Cloud တွင်အလိုအလျောက်သိမ်းဆည်းလိမ့်မည်။ သို့မှသာဤကိစ္စတွင်ကျွန်ုပ်တို့ဘာမှလုပ်စရာမလိုပါ။ အပလီကေးရှင်းရှိအရန်ကူးခြင်းများ၏ဖွဲ့စည်းပုံသည်အလွန်ရိုးရှင်းသည်။
ယခုကျွန်ုပ်တို့စကားဝိုင်းများကိုအရံအဖြစ်သိမ်းဆည်းပြီးပြီ ဖြစ်၍ ဤကိစ္စတွင်ကျွန်ုပ်တို့စိတ်ဝင်စားသောကိစ္စကို ဆက်၍ သွားနိုင်သည်။ ငါတို့သွားမယ် WhatsApp တွင်အသုံးပြုသောဖုန်းနံပါတ်ကိုပြောင်းပါ, ဒါကြောင့်ငါတို့လျှောက်လွှာ၌ရှိသော chats တစုံတခုကိုဆုံးရှုံးသွားကြသည်မဟုတ်။ ဤကိစ္စတွင်၊ လိုက်နာရမည့်အဆင့်များအားလုံးကိုစာတိုပေးပို့စနစ် application အတွင်း၌လည်းလုပ်ဆောင်သည်။ ငါတို့လုပ်ရမည့်အရာမှာ၊
WhatsApp ကိုသင်၏ Android ဖုန်းတွင်ဖွင့်ပါ
နံပါတ်ပြောင်းရန်ခွင့်ပြုသည့် SMS လက်ခံရရှိရန်စောင့်ပါ
နံပါတ်အသစ်ပေါ်တွင် setup ကိုစတင်ပါ
WhatsApp တွင်သင်၏ chats များကိုအရန်ကူးထားပါ
ဤနည်းအားဖြင့်သင်သည် Android တွင်ပုံမှန်အလုပ်လုပ်နေသည့် application ရှိလိမ့်မည်။ သင်သာသင်ရရှိထားသောဖုန်းနံပါတ်အသစ်ကိုအသုံးပြုပြီးဖြစ်သည်။ အဆိုပါ chats ပွနျလညျထူထောငျရှိခြင်းအပြင်ပထမအပိုင်းမှာလုပ်ခဲ့တဲ့ backup ကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်သင်ရှာဖွေနေတဲ့အတိအကျကတော့ဒီကိစ္စမှာမည်သည့်သတင်းအချက်အလက်မျှမဆုံးရှုံးခဲ့ပါဘူး။ သင်မြင်နိုင်သည်အတိုင်းလုပ်ဆောင်ရန်မှာရှုပ်ထွေးသောလုပ်ငန်းစဉ်မဟုတ်ပါ။
ထို့ကြောင့်၊ သင်သည်ဖုန်းနံပါတ်ကိုပြောင်းလဲလိုသော်လည်းသင်အသုံးပြုမည့်ကိရိယာကိုအချိန်မရွေးသင်သိမ်းဆည်းပါက၊ ဤကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ ပြproblemsနာရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ၊ သင်ပြထားသောအဆင့်များကိုလိုက်နာရန်လိုအပ်သည်။ သင့်ဖုန်းတွင် WhatsApp ကိုဆက်လက်ခံစားနိုင်ပါ။ အဆိုပါပြောဆိုမှုများမဆိုဆုံးရှုံးခြင်းမရှိဘဲ သင်ယခုအချိန်အထိလူကြိုက်များသောစာတိုပေးပို့ရေးအက်ပ်တွင်ရှိသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » WhatsApp တွင်ဖုန်းနံပါတ်ကိုဘယ်လိုပြောင်းရမလဲ
မေးခွန်းတစ်ခုကိုကျွန်ုပ်ဖုန်းနံပါတ်ပြောင်းလိုက်သည်ဆိုလျှင် SIM ကဒ်ကိုလည်းပြောင်းလဲရန်လိုအပ်သည်။ အချို့အဆင့်တွင်ဖုန်းကိုပိတ်ပြီး SIM ကဒ်အသစ်ကိုနံပါတ်အသစ်နှင့်ထည့်ရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။ မည်သည့်အချိန်တွင်ထိုအဆင့်ကိုလုပ်ဆောင်ရန်သတ်မှတ်ထားခြင်းမရှိပါ။ ငါဖုန်းကိုပိတ်, SIM ကိုပြောင်းလဲပြီးတော့အပေါ်မှာသင်အသေးစိတ်ပြောင်းလဲမှုများကိုလုပ်, ငါမှန်တယ်?
ကောင်းသောမင်ဖာနန်ဒို။ အကယ်၍ သင်သည် SIM ကိုပြောင်းလဲလိုပါကသင်၏ချက်တင်များကိုအရင်ကူးယူထားရမည်။ ၎င်းသည်ဂူဂဲလ်အကောင့်တွင်အရန်ကူးထားကြောင်းသတိရပါ။ ပရိုဂရမ်ကိုရပ်ဆိုင်းပြီး SIM ကိုပြောင်းလဲပြီးနောက်၎င်းကိုပြန်လည်တပ်ဆင်သင့်ကြောင်းအကြံပြုပါသည်။ ၎င်းသည်သင်၏အရန်ကူးစက်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိပြီး၎င်းကိုကူးယူနိုင်သည်။ ၎င်းသည်ဂူဂဲလ်အကောင့်တစ်ခုတည်းဖြစ်ရမည်ကိုသတိရပါ
ကျွန်ုပ်၌မေးခွန်းတစ်ခုရှိသေးသည်။ ကျွန်ုပ်၏ chats များကို iPhone မှ Android သို့မည်သို့ပြန်ယူမည်နည်း။ မည်သူမဆိုသိသနည်း။ ဆုံးရှုံးနိုင်လား .. ?
ဂူဂဲလ်မြေပုံများ incognito အသုံးအနှုန်းသည်ဂူဂဲလ်ပြောဆိုသကဲ့သို့လျှို့ဝှက်ခြင်းမရှိပါ